Faysalow, Farshaxanimada Wareysigaaga Ku Noqo +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Faysalow, Farshaxanimada Wareysigaaga Ku Noqo +VIDEO
Waxaan daawadey laba wareysi oo aad ka qaadey kana soo daysey barmaamijka aad u bixisey MILICSIGA SIYAASIGA. Mid waxaad la yeelatey wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka (minister of planning) md. Ali Ibraahim Maxamed (Sanyare). Halka aad ka kale la yeelatey wasiirka duulista hawada md. Maxamuud Xaashi. Runtii waad ku hafatey labadaba.
Faysal, waxaa iigu kaa danbeysay markaad gashey Somali TV. Muqdisho laba iyo sodon sanadood ka hor. Waxaanad ahayd xidig soo kacaaya (rising star). Inkastoo ay saxaafadu military ahayd xiligaa, waxaan hubaa inaad ka heshay waayo aragnimo dheeli-tiran iyo cabqarinimo aan la holing Karin.
Waxaad tahay sufuxi aan bililiqo ku iman sida hadda xaalku yahay, aqoon iyo tababar wariyenimo qaba, waayo aragnimona u dheer tahay. Sidaa awgeed, kuu shariximaayo
suxufiga iyo waajibaadkiisa (journalism & journalism ethics). Waxaa se hoos u dhacey, waxay dadku kaa filayeen gaar ahaan intii hore kuu taqaaney labadan wareysi ka dib.
Aan ku noqonee, wareysiga aad ka qaadey Wasiirka Duulista md. Maxamuud Xaashi mudo aan sidaa u sii fogeyn, waxuu u ekaa ama ahaa “qudbad” aad wakhti iyo hawo siisey (free propaganda speech).
Waxuu isugu jirey faan, hanjabaad iyo awood sheegasho. Waanad ku dhacdey in aad dabagasho hubinta guulaha iyo wax qabadka uu sheeganaayo. Waxaad kalood ku dhacdey in aad u diyaar-garowdo kulankan si aad xogta u hor dhigto faanka wasiirka. Waxaad ilowdey inaad shacabka wakiil ka tahay oo
aad afkoodii ku hadleyso. Taas awgeed, waxaa halkaas ku lumay sufuxunimadii iyo dhelitirkeedii (balanced journalism).
Tusaale ahaan Faysal, wasiirku waxuu sheegey in guulaha uu soo hooyey ay ka mid tahay hantida uu ka hantiyey shacabkii degenaa airporka hareerihiisa dhul qiimahiisu gaadhaayo 300 milyan oo dollar isagoo isticmaalaya hab dawladeed.
Sidoo kale , waxaad ilowdey inaad weydiiso suaalahii ku haboonaa sida :- xagee dhulkaaasi marey, ma airporka ayaa leh mise dad kale ayuu gacanta u galey? Xagee dadkii laga qaadey dhulku ku danbeeyey,maxaase loogu bedelay?. Waa maxay sharciga dawladu ka leedahay muwaadinka dhulkiisa danguud loogu baahdo sida tan oo kale?. Si kastaba ha ahaatee, wareysigaasi waxuu u ekaa xaysiis iyo ii dheh aad wakhti siisey ama (paid advertisement).
Wareysiga labaad, ee aad ka qaadey Md. Ali sanyare wuu ka duwanaa. Marka hore wareysi waliba waxuu uu leeyahay miisaanka qofka martida kuu ah. Sida aad ugu diyaar-garowbeysaana waxay ku xidhan tahay waxaad dooneyso in ay shacabku ka koror-sadaan martidaada.
Sidaad la socoto, md Ali Ibrahim Maxamed (Sanyare), waxuu ka mid yahay shaqsiyaadka tirada yare ee hantida u ah ummada reer somaliland (national asset), sida DR. Adna, Mohamed Ali Geedi iyo Sheekh Dirir hadaan dhawr ka magacaabo. Waa nibiri u soo caaryey dadkan.
Waxuu ka mid yahay dadka kooban ee aan u soo shaqo tegin Somaliland, wakhtigiisa iyo hantidiisana geliyey Somaliland si uu ugu qaato maalmaha u hadhey.
Waxay ahayd in isaga iyo kuwa la mid ka ah la xafido oo ay xukumadu sameyso xarun cilmi baadhiseed iyo marjac aqooneed oo lagu noqdo marka loo baahdo. Waxay ahayd in la dhiso macadka maraareynta iyo maamul wanaaga. Mayse dhicin, oo waxay la mid yihiin dadka suuqa jooga.
Sikastba ha ahaatee, wareysigaasi Faysaloo uu kaa hoosey marlaad. Waxay ahayd in aad Ali iyo dadka issu dayso. Waxay ahayd in aad dhegeysato sidaad u dhegeysatey maxamuud xaashi. Taariikhda noloshiisa iyo tiisa wax-barasho-na dadka u dayso. Waayo, waxay rejo iyo naruuro u tahay dhalinta badda isku gureysa maanta ee aan lahayn cid ay ku daydaan (role model).
Waxay ahayd inaad xasuusiso meelaha uu iloobey ee may ahayn in aad ku soo celiyo dhiiqada qabyaalada iyo siigada maamulka maanta jiraa madaxa kula jiro. May ahayn in aad sida cuqaasha maanta jirta u wareysato aqoonyahan taalooyin ku leh xarumaha qaramada midowbey (united nations).
Hadda iyo dan, Faysaloo, tani ku dhaaftaye , waxaan kugula talinayaa inaad ka baaraan degto wareysiyadaada danbe dibna ugu noqoto qaabka iyo wakhtiga aad geliso si aydaan isugu ekaan adiga iyo dhalinta yar yar ee cidlada ka heley shaqadan wakhtiga dheeri kaa galey.
Ali jama – Toronto
AFEEF WARDOON.NET MAS UUL KAMA AHAN QORAALKAN